Kasị mma RGB CCT Agba na-agbanwe LED Smart Light Bulb Manufacturer and Factory |Gịlite
RGB CCT agba na-agbanwe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ
YOURLITE na-enye ngwọta ọkụ nwere otu nkwụsị, gụnyere smart ọkụ bọlbụ, ngwa ọkụ ụlọ, ọkụ azụmahịa, na ọrụ agbakwunyere uru dị iche iche.Ị nwere ike ugbu a mepụta ngwaahịa ọkụ na ihe ngwọta ọ bụla, wee wuo ọnọdụ ọkụ ọ bụla ịchọrọ.
Igwe ọkụ smart smart anyị nwere ọtụtụ uru bara uru maka gị:
Njikwa olu & Ngwa:Igwe ọkụ smart anyị na-arụ ọrụ nke ọma na Alexa, Google Assistant na ngwa Smart Home.Enwere onwe gị ịgbanwuo/ gbanyụọ bọlbụ gị, mezie nchapụta, ma ọ bụ gbanwee agba, jiri olu gị ma ọ bụ pịa bọtịnụ iji jikwaa.
Ọtụtụ nde agba:N'inwe ihe karịrị nde 16 nhọrọ agba doro anya yana ụdị ọnọdụ 8 preset dị na ngwa Smart Home, ọmarịcha ime ime gị ga-agbanwe n'ihu gị.
Ọrụ ngụ oge dị mma:Ọ dị mfe ugbu a karịa mgbe ọ bụla ijikọ bọlbụ smart gị n'ime ndụ gị kwa ụbọchị.Site na ụdịdị dị ka ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, ị nwere ike ịtọ bọlbụ gị ka ọ na-enwu ruo mgbe i tetara ma ọ bụ jiri nwayọ nwayọ ruo mgbe ị gafegoro n'ụra.
Njikwa otu:Zụrụ ọtụtụ bọlbụ.Site na ngwa Smart Home, ị nwere ike ịmepụta otu iji chịkwaa ọtụtụ bulbs n'otu oge site na ebe ọ bụla nwere Wi-Fi kwụsiri ike.Ị nwekwara ike ịkekọrịta akaụntụ gị n'etiti ndị enyi na ndị ezinụlọ maka ntụrụndụ karịa (naanị 2.4 GHz kwadoro).
Igwe ọkụ Smart LED Dimmable:Gbanwee nchapụta ọkụ smart gị ka ọ dabara nke ọma na ọnọdụ gị ma ọ bụ ihe ndozi gị.Nwee ọmarịcha ọcha na-ekpo ọkụ (2700K) ma ọ bụ ọcha oyi (6500K) ebe ọ bụla n'ụlọ gị.
Njikwa anya APP Smart:2.4GHz Wi-Fi naanị (ọ bụghị 5GHz).
1.Switch ugboro atọ iji hụ na ọnọdụ na-egbuke egbuke nke ìhè ọkụ.
2.Mepee TUYA APP wee pịa gbakwunyere n'akụkụ aka nri elu.
3.Họrọ ọkụ iji jikọọ ngwa.
4.Connect ìhè bulbs naanị site na WiFi maka oge mbụ, biko jide n'aka na ọkụ na-egbuke egbuke ngwa ngwa, na paswọọdụ WiFi nke ị tinyere na ya ziri ezi.
5.After ngwaọrụ jikọọ ọma, enweta "Ngwaọrụ" na ala.Aha ngwaọrụ nke smart oriọna na-egosi na ndepụta.Kpatụ ya ka ịbanye na njikwa njikwa nke Smart Lamp.
Igwe ọkụ ọkụ.RGB+CCT+DIM.C37
Igwe ọkụ ọkụ.RGB+CCT+DIM.G45
Igwe ọkụ ọkụ.RGB+CCT+DIM.G95/120
Energy Star, CE, FC, UL, ROHS kwadoro.Ọkụ ọkwọ ụgbọ ala, kwụsiri ike.Site na nkwa nke 25,000 awa ndụ yana nkwa afọ 2.
Ọ dabara maka ime ụlọ, ime ụlọ, kichin, wdg Enwere ike iji ya dị ka onyinye maka ịchọ mma ezumike, nnọkọ na ebe ntụrụndụ.Igwe ọkụ smart LITE gị bụ ezigbo nhọrọ gị.
Nke gara aga: Robot na-asachapụ ala akpaaka
Osote: PIR Sensọ CCT Dimmable Smart Iju Mmiri Iju Mmiri
Classic Clear Glass CCT Dimmable Filament Smart...
Bọlụlụ WIFI na-agbanwe agba RGB yana njikwa IR
38 Degree Beam Angle Spotlight GU10 WIFI Bulb
Na-akwado APP Setting E27 Smart Lamp Holder Socket